ဆွီဒင်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၆)
11 Jun 2018 . 12:37 PM
၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကတော့ ဘရာဇီးလ် ဂန္ထ၀င် ပီလီကို ဘောလုံးဘုရင်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လျှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့ အာဂျင်တီးနား၊ ချီလီ၊ မက္ကဆီကိုနဲ့ ဆွီဒင်တို့ထဲကနေ ဆွီဒင်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ မြို့ကြီး (၁၂)မြို့မှာ ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် မြို့အများဆုံးမှာ ကစားတဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အာရှတိုက်နဲ့ အာဖရိကတိုက်တို့ ခြေစစ်ပွဲအဆင့်ကို ပေါင်းစပ်ကစားခဲ့ပြီး အာရှတိုက် ကိုယ်စားပြု အစ္စရေးအသင်း တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲကို လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို လက်ရှိချန်ပီယံအနောက်ဂျာမနီ၊ အိမ်ရှင်ဆွီဒင်၊ ဘရာဇီးလ်နဲ့ ပြင်သစ်အသင်းတို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆွီဒင်က အနောက်ဂျာမနီအသင်းကို (၃-၁)ဂိုး၊ ဘရာဇီးလ်က ပြင်သစ်ကို (၅-၂)ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရကာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ပီလီရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ဘရာဇီးလ်အသင်းက အိမ်ရှင် ဆွီဒင်အသင်းကို (၅-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၇)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Dates – 8–29 June (22 days)
Teams – 16 (from3confederations)
Champions – Brazil (1st title)
Runners-Up – Sweden
Third Place – France
Fourth Place – West Germany
Goals Scored – 126 (3.6 per match)
Attendance – 819,810 (23,423 per match)
Top Scorer(s) – Just Fontaine – France (13 goals)
Best Young Player – Pelé (Brazil)
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၆)
၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလားကတော့ ဘရာဇီးလျ ဂန်ထဝငျ ပီလီကို ဘောလုံးဘုရငျလို့ တငျစားချေါဝျေါဖို့ ဖွဈလာခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ အိမျရှငျနိုငျငံအဖွဈ လြှောကျထားခဲ့ကွတဲ့ အာဂငျြတီးနား၊ ခြီလီ၊ မက်ကဆီကိုနဲ့ ဆှီဒငျတို့ထဲကနေ ဆှီဒငျနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ ရရှိခဲ့ပွီး နိုငျငံတဈဝှမျးမှာရှိတဲ့ မွို့ကွီး (၁၂)မွို့မှာ ပွိုငျပှဲကို ကငျြးပခဲ့လို့ ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ မွို့အမြားဆုံးမှာ ကစားတဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ စံခြိနျတငျခဲ့ပါတယျ။ အာရှတိုကျနဲ့ အာဖရိကတိုကျတို့ ခွစေဈပှဲအဆငျ့ကို ပေါငျးစပျကစားခဲ့ပွီး အာရှတိုကျ ကိုယျစားပွု အစ်စရေးအသငျး တိုကျရိုကျခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ ပွိုငျပှဲကို လာရောကျယှဉျပွိုငျခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို လကျရှိခနျြပီယံအနောကျဂြာမနီ၊ အိမျရှငျဆှီဒငျ၊ ဘရာဇီးလျနဲ့ ပွငျသဈအသငျးတို့ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး ဆှီဒငျက အနောကျဂြာမနီအသငျးကို (၃-၁)ဂိုး၊ ဘရာဇီးလျက ပွငျသဈကို (၅-၂)ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရကာ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို တကျရောကျခှငျ့ ရရှိခဲ့ကွပါတယျ။ ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ပီလီရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ ဘရာဇီးလျအသငျးက အိမျရှငျ ဆှီဒငျအသငျးကို (၅-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး ပထမဆုံးအကွိမျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၇)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ